Andriamanitra dia mampihetsi-po - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-04 mpandimby ny Magazine > Andriamanitra dia fihetseham-po
"Tsy mitomany ny ankizilahy."
"Mihetsi-po ny vehivavy."
"Aza be sipa!"
"Ho an'ny sissies fotsiny ny fiangonana."
Mety efa naheno an'ireo fanambarana ireo ianao taloha. Izy ireo dia manome ny fahatsapana fa ny fihetseham-po dia misy ifandraisany amin'ny fahalemena. Nilaza izy ireo fa mila matanjaka sy hentitra ianao hiroso amin'ny fiainana ary hahomby. Amin'ny maha lehilahy anao dia mila mody ianao fa tsy manana fihetseham-po. Amin'ny maha-vehivavy te hahomby amin'ny tontolon'ny orinasa dia mila henjana, mangatsiaka ary mampihetsi-po ianao. Ny vehivavy ara-pihetseham-po dia tsy manana toerana hapetraka eo amin'ny rihana mpanatanteraka. Tena marina ve izany? Tokony hahatsapa fihetseham-po ve isika sa tsia? Moa ve isika mahazatra kokoa rehefa maneho fihetseham-po kely kokoa isika? Ahoana no namoronan'Andriamanitra antsika? Izy ve no namorona antsika ho olona be fitiavana, ara-pihetseham-po sa tsia? Misy ny milaza fa tsy dia mionona ny lehilahy ary izany no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona ho zavaboary tsy dia be loatra ara-pihetseham-po, izay nahatonga ny stereotype betsaka momba ny lahy sy ny vavy. Ny fiaraha-monina dia nilaza fa ny lehilahy dia tsy omena fihetseham-po ary ny vehivavy kosa dia mahatsiaro ho mihetsi-po be.
Nohariana araka ny endrik’Andriamanitra ny olombelona. Karazana sary manao ahoana anefa izany? Hoy i Paoly momba an’i Jesosy: “Izy no endrik’Andriamanitra tsy hita, ny Lahimatoa talohan’ny zavaboary rehetra.” ( Kolosiana. 1,15). Mba hahatakarana hoe iza isika araka ny endrik’Andriamanitra, dia mila mijery an’i Jesosy isika satria Izy no tena endrik’Andriamanitra.Ny tena maha-izy antsika Satana, ilay mpamitaka, dia te hamitaka antsika momba ny tena maha-izy antsika hatrany am-boalohany. Mino aho fa anisan'ny maha-izy antsika koa ny tontolon'ny fihetseham-po ary te hamitaka antsika momba ny fihetseham-pontsika i Satana. Miezaka izy ny hahatonga antsika hino fa malemy sy adala ny mahita ny fihetseham-po sy manome toerana azy ireo. Nilaza i Paoly momba an’i Satana fa nanajamba ny tsy mpino izy mba tsy hahita ny fahazavan’ny Filazantsaran’ny voninahitr’i Kristy, izay mitovy amin’ny endrik’Andriamanitra (2. Korintiana 4,4).
Ny marina dia: mampihetsi-po Andriamanitra! Mampihetsi-po ny olona! Mampihetsi-po ny lehilahy! Ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny andrim-pianarana psikolojika (Mindlab) dia nahatsikaritra fa ny lehilahy dia be fientanam-po kokoa noho ny vehivavy. Ny fihetsika ara-pihetseham-po nataon'ny lehilahy sy ny vehivavy dia norefesina tamin'ny ambaratonga ara-tsaina. Naseho fa, na dia betsaka aza ny fihetsem-po refesina amin'ny lehilahy noho ny amin'ny vehivavy, dia tsy dia nahatsiaro tena ho ambany loatra ny lohahevitry ny andrana. Ny vehivavy dia naneho fihetseham-po vitsy kokoa nandritra ny fandrefesana, fa nahatsapa azy ireo mihoatra noho ny lohahevitra fitsapana lahy.
Zavaboary ara-pihetseham-po ny olombelona. Ny hoe mihetsi-po dia midika hoe olombelona. Ary ny mifamadika amin'izany: ny hoe ketraka dia ny tsy maha-olombelona. Raha tsy manana fihetseham-po sy fihetseham-po ianao dia tsy olona tena izy. Rehefa voaolana ny zaza dia tsy maha-olombelona ny tsy mahatsapa na inona na inona. Indrisy anefa fa miompana amin'ny fanafoanana ny fihetseham-pontsika isika, toy ny hoe zavatra ratsy. Tena mampihetsi-po azy ireo izy. Tsy fantatr’izy ireo izay tokony hoheverintsika momba an’i Jesosy manao toy izao: “Ary nanao kotopia tamin’ny mahazaka Izy, ka nandroaka azy rehetra mbamin’ny ondry aman’omby ho eo an-kianjan’ny tempoly, dia naidiny tamin’ny mpanakalo vola sy nandondona ny latabatra. " (Jaona 2,15). Tsy fantatr’izy ireo koa izay tokony hiheverana an’i Jesosy izay nitomany sy nitomany noho ny namany maty. Fa Johannes 11,35 mitatitra marina momba izany. Nitomany mihoatra noho izay tsapantsika i Jesosy. Hoy koa i Lioka: “Ary rehefa mby akaiky izy, dia nahita ny tanàna ka nitomany azy.” ( Lioka 19,41). Ny teny grika midika hoe mitomany dia mitomany mafy. Faly aho fa tezitra sy naneho ny fihetseham-pony i Jesosy - na dia nitomany aza izy. Aleoko manompo an'Andriamanitra be fanahy toy izay manetry tena. Ilay Andriamanitra nambara ao amin’ny Baiboly dia Andriamanitra feno fahatezerana, fialonana, alahelo, fifaliana, fitiavana ary fangorahana. Raha tsy nanana fihetseham-po Andriamanitra dia tsy hiraharaha antsika na ho any amin’ny afo mandrakizay isika na tsia. Noho izy manana fihetseham-po lalina amintsika, dia naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao izy, mba ho faty indray mandeha ho an’ny olona rehetra. Misaotra an'Andriamanitra fa mihetsi-po izy. Mihetsi-po ny olona satria mitovy endrika amin’Andriamanitra ara-pihetseham-po.
Fihetseham-po amin'ny zavatra tsara
Avelao hahay ho be fihetseham-po ianao. Ny olombelona, ​​na ny masina aza, dia tokony hitovizany. Aza avelan'ny devoly hahatonga anao tsy hihonon-tena. Mivavaha mba hanampian'ny Ray any an-danitra anao hahatsapa fihetseham-po amin'ny zavatra tsara. Aza tezitra amin'ny vidin-tsakafo avo lenta. Tezitra noho ny vono olona, ​​fanolanana ary fanararaotana zaza. Afaka mamela ny fihetseham-pontsika ho faty ny lalao amin'ny tele sy tele. Mora ny mankany amin'ny toerana izay tsy mahatsapa na inona na inona, eny fa na dia ny Kristianina izay novonoina noho ny finoany aza. Ho an'ny fahalotoam-pitondrantena hitantsika amin'ny fahitalavitra sy amin'ny sinema, ho an'ireo ankizy kamboty noho ny tsimokaretina VIH sy Ebola.
Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny ota dia ny fahalotoan'ny fihetseham-pontsika. Tsy fantatsika intsony hoe inona no tsapany. Mivavaha mba hanasitranana ny Fanahy Masina amin'ny fiainanao ara-pihetseham-po sy hanova ny fihetseham-ponao amin'ny zavatra nalain'i Jesoa tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ka afaka mitomany amin'ny zavatra nitarainan'i Jesosy ianao, tezitra amin'ny zavatra izay tezitra tamin'i Jesosy, ary mahatsapa faniriana amin'ireo zavatra natolotr'i Jesosy fatratra.